नेपाली स्वादको कोरियाली छ्याङ :: Setopati
नेपाली स्वादको कोरियाली छ्याङ
सुनिता सिटौला काठमाडौं, मंसिर १७
सहरी युवा पुस्तामा केही समययता कोरियाको बोलबाला छ। चाहे त्यो फिल्म होस्, फेसन होस् या संगीत। यही लहरमा जोडिन आइपुगेको छ- कोरियाली छ्याङ।
'छ्याङ इन क्यान' ब्रान्डमा बिक्री भइरहेको यो मदिराले झट्ट सुन्दा काठमाडौंमा प्रचलित लोकल जाँडको सम्झना गराउँछ। तर, खासमा यो कोरियाबाट आयात गरिएको हो।
आशिष शाह पहिल्यैदेखि कोरियाली सामानको व्यापार गर्दै आएका थिए। उनी मदिरा कारोबार गर्ने एसियन स्वान कम्पनीका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर हुन्। यो उनको पारिवारिक व्यवसाय हो, जसले कोरियाको स्थानीय रक्सी 'सोजु' नेपाली बजारमा बेच्दै आएको छ।
व्यापार सिलसिलामा कोरिया आउजाउ गर्दा शाहले त्यहाँको अर्को रक्सी ‘माक्गोली’ चाखेका थिए। उनलाई ‘माक्गोली’ को स्वाद काठमाडौंको छ्याङजस्तै लाग्यो।
'मुखमा हाल्नेबित्तिकै छ्याङको स्वाद आयो। त्यतिबेलै सोच्यौं- नेपाली स्वादको यो कोरियन छ्याङले यहाँ राम्रो बजार लिन सक्छ,' आशिषले सेतोपाटीसँग भने।
लोकल स्वादको विदेशी रक्सी आयात गरेर नेपालमा बजार लिन सकिन्छ भन्ने उनले कसरी सोचे? काठमाडौंमा परम्परागत रूपले लोकप्रिय छ्याङ हुँदाहुँदै त्यही स्वादको विदेशी छ्याङ किन?
हामीले यही प्रश्न आशिषसँग गर्यौं।
'पक्कै यो नेपाली स्वादकै छ्याङ हो। तर, जहाँसम्म मेरो अनुभव छ, काठमाडौंमा छ्याङ खान त्यति सहज छैन। स्वाद जिब्रोमै बसेको भए पनि त्यही स्वाद खोज्न काठमाडौंका लोकल साथीहरूको भोज जानुपर्छ, वा भट्टीहरू चहार्नुपर्छ,' उनले भने, 'जसका लोकल साथीहरू कम छन्, जो छ्याङ खोज्दै भट्टी पस्न चाहँदैनन् वा समयले भ्याउँदैनन्, हामी उनीहरूलाई लोकल स्वादकै छ्याङ क्यानमा उपलब्ध गराउँदै छौं।'
यति मात्र होइन, काठमाडौंमा छ्याङ लोकप्रिय भए पनि अन्य मदिराजस्तै प्याकेजिङ गरेर बिक्री भएको थिएन। संस्कृतिसँग जोडिएको यो मदिरालाई प्याकेजिङ गरेर व्यवस्थित ढंगमा किन नबेच्ने भन्ने हुटहुटीले उनलाई छोप्यो।
आशिषले काठमाडौंमै व्यावसायिक रूपले छ्याङ उत्पादन गरेर प्याकेजिङमा बेचुँ कि भन्ने पनि नसोचेका होइनन्। तर, मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमअनुसार अनुमति लिन गाह्रो थियो। बरू उही स्वादको कोरियाली छ्याङ आयात गरेर बेच्न सजिलो हुने उनले देखे।
यही योजनाअनुरूप आशिष र उनको टिम राम्रो गुणस्तरको छ्याङ आयात गर्ने तयारीमा लाग्यो। काठमाडौंदेखि पाटन र भक्तपुरको छ्याङसमेत खाएका उनले कोरियाली छ्याङका सबै स्वाद चाखेर हेरे। तीमध्ये सबभन्दा राम्रो र नेपाली जिब्रोमा बसेको स्वादसँग मिल्ने छ्याङ आफ्नै निगरानीमा उत्पादन गराए। त्यसमा केही चिजको मात्रा तलमाथि गरे। यसो गर्दा उताको माक्गोलीभन्दा अलिकति भिन्न र नेपाली छ्याङसँग हुबहु स्वाद तयार भएको आशिष सम्झन्छन्।
उनका अनुसार कोरियाली उत्पादकले यो स्वादको छ्याङ एसियन स्वान कम्पनीका लागि मात्र तयार पारेको हो। कोरियामै गएर खोजे पनि ठ्याक्कै यही स्वाद नभेटिने उनको भनाइ छ।
'हामीले यस्तरी ब्रान्डिङ गरेका छौं, यो क्यान समाउँदा र खाँदा विदेशी छ्याङ खाएको अनुभूति नै हुँदैन,' उनले भने, 'नामदेखि स्वादसम्म नेपाली।'
'यसले राम्रो बजार लिनु भनेको हाम्रै लोकल छ्याङलाई फाइदा हो। अहिले प्याकेजिङ गरेर बेच्ने चलन छैन। यसले त्यसको निम्ति पनि बाटो खोल्नेछ। बजार माग हेरेर यस्ता थुप्रै व्यावसायिक उत्पादन फस्टाउन सक्छन्,' उनले भने।
सरकारले अनुमति दिए नेपाली छ्याङ पनि व्यावसायिक उत्पादन गरेर प्याकेजिङ गरी बिक्री गर्ने उनको योजना छ। 'हामीले प्रस्ताव गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'सरकारले अनुमति दिए यसमा पनि काम सुरु गर्नेछौं।'
यो उत्पादन नेपाली बजारमा भित्रिएको गत फागुन महिनाबाट हो। यसबीच उपभोक्ताको प्रतिक्रियाले आफू उत्साहित भएको आशिष बताउँछन्। त्यही भएर सुरूमा थोरै परिमाण अर्डर गरेका उनले क्रमश: बढाउँदै लगेका छन्।
गत फागुनमा ७ लिटरबाट यसको आयात सुरु भएको थियो। त्यसपछि असार मसान्तसम्म ६ हजार ३ सय लिटर आयात भयो। यसबाट सरकारलाई ५ लाख ८७ हजार राजस्व उठेको भन्सार विभागले जनाएको छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १५ हजार १ सय ५० लिटर छ्याङ कोरियाबाट आयात भएको देखिन्छ। यसबाट १६ लाख १० हजार राजस्व उठेको छ।
यो ७५० मिलिलिटरको बोतल र ३५० मिलिको क्यानमा उपलब्ध छ। एक बोतलको मूल्य ३ सय ५० र एक क्यानको २ सय रूपैयाँ पर्छ।
'अचेल भट्टीमा गएर जाँड खान हिच्किचाउनेहरू टन्नै छन्। यो छ्याङ भने क्यान वा बोतलमा खाएर सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्ने ट्रेन्ड बनेको छ,' उनले खुसी हुँदै भने, 'हामीले बजारमा ल्याएदेखि देशका विभिन्न ठाउँबाट अर्डर आउँदैछ। सबैले आफू बस्ने ठाउँतिर पनि चाहियो भनिरहेका छन्।'
अहिलेलाई यो छ्याङ काठमाडौं उपत्यकासहित पोखरा, चितवन, धरान लगायत सहरी क्षेत्रमा उपलब्ध छन्।
नेपालमै उत्पादन गर्ने हो भने मूल्य योभन्दा सस्तो पर्ने र निर्यातसमेत गर्न सकिने आशिष बताउँछन्। चीन, जापान, मलेसिया, कोरिया लगायत मुलुकमा नेपाली छ्याङले राम्रो बजार लिने सम्भावना उनले देखेका छन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १७, २०७५